स्मृतिमा जनयुद्ध::Nepalese News Portal
२०५२ साल फागुन १ अर्थात आजकै दिन तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गरेको थियो । महान जनयुद्धको शंखघोष गर्ने पार्टी माओवादी, माओवादी केन्द्र, एमाओवादी हुदै हाल एमालेसंग पार्टी एकता गरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वनेको छ । माओवादी आन्दोलन विभिन्न समयमा विभाजित हुँदै विप्लव नेतृत्वमा नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), वावुराम नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी, आहुतीको नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र गोपाल किरातीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र फरक फरक रुपमा अस्तित्वमा छन् । यी सवै पार्टीहरु जनयुद्धको धारावाट यहाँसम्म आईपुगेका पार्टीहरु हुन् । नेपाली जनताको सचेतन पहलकदमीमा आमुल परिवर्तनको लक्ष्यसहित शुरु भएको महान जनयुद्ध आज २४ औं वर्षमा आईपुगेको छ । महान जनयुद्धको २४ औं दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइरहदा जनयुद्ध जे लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको थियो, त्यो पुरा भयो या भएन ? आजको मुलुक जनता र कार्यकर्ताको अवस्था के छ ? आदी विषयमा छलफल गर्नै पर्छ।
तत्कालिन अवस्थामा हामीले देशको वर्ग विष्लेशण गर्दै नेपाल अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक देश भएको निष्कर्ष निकाल्यौ र नोकरशाही पुँजीपति र दलाल पुँजीपति, सामन्त र जमिन्दार क्रान्तिको दुश्मन शक्ति र अरु सर्वहारा गरिव किसान, मध्यम किसान र धनी किसान तथा राष्ट्रिय पुँजीपतीसम्म क्रान्तिको मित्र शक्तिको रुपमा व्याख्या गरेर निशाना निर्धारण गर्यौं । साथसाथै क्रान्ति नयाँ ढंगले अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने बैचारिक संश्लेषण सहित गाउँले शहर घेर्ने रणनितिमा आधारित दिर्घकालिन जनयुद्ध सुरु गर्यौ । यो चिनमा माओले अपनाएको तरिका हो । यसरी प्रशिक्षित भएर हामी जनयुद्धमा गएका थियौं । हामी गाउँले लाखौ जनताहरु जो गरिविको रेखामुनी छन् । एकछाक खाने र एकआङ्ग लगाउने समस्यामा छन्, तिनीहरुको जीवनमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सामन्त र जमिन्दारको सम्पती कव्जा गरि भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई वितरण गर्ने, दलाल पुँजीपती र नोकरशाही पुँजीपतिको उद्योग र सम्पती राष्ट्रियकरण गर्ने लक्ष्य थियो । सेना नभएको कम्युनिष्ट पार्टीसंग आफ्नो भन्ने केही हुदैन भन्दै हामीले जनमुक्ति सेना वनायौं । युद्धका चरणहरु निर्धारण गर्यौ । विशाल ग्रामिण ईलाकाहरु खाली गर्दै आधार ईलाका वनायौ । जनसरकार चलायौ र रणनैतिक प्रत्याक्रमणको चरणसम्म पुग्यौ । दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन चुनवाङ बैठकले अघि सारेको वाह्रवुदे हुदै आजको दिनसम्म आईपुग्यौ ।
जनयुद्धका आदर्श पात्रका रुपमा चिनिएका हितराज पाण्डेहरु कृषी कर्ममा छन् । लोकेन्द्र विष्टहरु कालो धान फलाउदै छन् । अनी ध्रुव पराजुलीहरु कता कता विलिन हुदैछन् । यी त प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन्, सयौं नेताहरु इतिहासको पानामा सिमित हुने खतरा पैदा हुदैछ । यसलाई उनिहरुको वैचारिक पलायन भनेर आलोचना गरेर मात्र छुट पाईदैन होला । शहिद परिवारलाई हामीले दश लाख त दियौ, तर के उनीहरु दश लाख पाउन मात्र शहिद भएका हुन् ? के उनीहरुले देखेको सपनाको हत्या नै भएको हो की अझै पुरा हुन्छ मान्यवर ? हामीले परिकल्पना गरेको समाज शोषण रहित समाज हो । तर यही समाजमा हिजोका लाल सिपाहीहरु आफै शोषित भएर नुनीलो आँसु पिउदै चिलगाडीमा विदेसिने र वाकसमा फर्कने क्रम कहिले रोकिन्छ मान्यवर ? हामीलाई राजनैतिक अर्थशास्त्रको प्रशिक्षणमा तपाईहरुले नै सिकाउनु भएको हो, आर्थिक आधारमा परिवर्तन गरेर उत्पादन र वितरणको स्वरुमा परिवर्तन नगरेसम्म उपरिसंरचनामा परिवर्तन गरेर मात्र शोषणको अन्त्य हुदैन । आज तपाइहरु उपरिसंरचनामा त कव्जा जमाउनु भएको छ । केही राम्रो काम पनी गर्दै हुनुहुन्छ । उर्जा र शिक्षा क्षेत्रमा केही आशाका किरणहरु देखिएका छन्, तर किन हाम्रो समाजमा शोषणको अन्त्य भएन कमरेड ? समावेसी र समानुपातिकका नाममा हामीले उत्पिडित वर्ग र समुदायका केही मान्छेहरुलाई माथी त उठायौ तर त्यसले त्यो समुदायलाई माथी उठाउन किन सकेन ? त्यसरी एकाध व्यक्तिलाई त हिजो राजाले पनि उठाउथे नि, तर उनिहरु नै त्यो समुदायको नाममा लुट्न तल्लीन हुन्थे । त्यसैले अव केही नयाँ सोच्नु पर्दैन र ?